यसपालीको चीन भ्रमणपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र किन भए गदगद ? – ZoomNP
यसपालीको चीन भ्रमणपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र किन भए गदगद ? प्रकाशित मिति: बुधवार, मंसिर १५, २०७३ समय - ८:४१:३२ मंसिर १५ पटक-पटक र अनेकन बहानामा भारत गइरहने, तर जानु-आउनुबाहेक ठोस उपलब्धी हात नपार्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र यसचोटिको चीन भ्रमणबाट केही उत्साहित देखिएका छन् ।
उनलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरो तहका नेताले भेटेको मात्र हैन, विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उनीहरुले स्वागतसमेत गरे । यो यात्राको तयारीका लागि यसअघि रेन्मिन युनिभर्सिटी, बेइजिङका प्राध्यापक रहेका डा. सुन लेचाउ अढाई महिनाअघि काठामाडौँ आएका थिए ।
उनले उक्त भ्रमणताका ज्ञानेन्द्रबाहेक राप्रपा उपाध्यक्ष धवलसमशेर जबरा, माओवादी नेता मोहन वैद्य, देव गुरुङलाई समेत भेटेका थिए । जसरी, माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएलगतै चीनबाट प्रोफेसर वाङ होइवेईले आएर काभ्रेको कामीडाँडामा अनन्तलाई भेटी फौजी पोशाक लगाए, अहिलेका यी प्राध्यापक डा सुनले पूर्वराजासहितका केही नेपाली नेतालाई त्यहि शैलीमा भेटेका हुन।
त्यसभन्दा केही अगाडि ज्ञानेन्द्रका बालसखा प्रभाकरसमशेर राणा र बुहारी हिमानी शाहलाई चीनले बोलाएको थियो । सबैखाले नेपाली समुदायसंग निकट रहने चिनियाँ नीतिबमोजि नै हुनुपर्छ, उनीहरु बोलाइएका । प्रभाकर त्यहीबेला चीनमा दुईपटक अस्वस्थ भई ढलेका थिए । त्यहाँबाट हतार-हतार उपचारार्थ लण्डन पुगे ।
बुझ्दा ढाडको अप्रेशन गरेको कारण त्यसको असर निस्किएको चिकित्सकले ठहर गरे । चिकित्सककै सल्लाहबमोजिम लठ्ठी टेकेर हिँड्न थालेका छन । हिमानीले चिनियाँ अधिकारीसंग कुराकानी गर्दा धादिङमा भूकम्पपीडितका लागि ५० वटा घर-टहरा बनाइदिन माग गरिन् । चिनियाँले ‘पाँच हजार घटीमा हात हाल्दैनौँ’ भनेर अझ बढी सहयोगको इच्छा देखाए ।
चिनियाँ अधिकारीले हिमानीलाई निर्मल निवासले दक्षिणसँग सम्बन्ध सुधार्नु जरुरी रहेको सुझाव दिए । पूर्वराजपरिवारका यी सदस्यको भ्रमणसूचीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग सिंगापुरमा भेट्ने उल्लेख थियो । तर, पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको क्राइसिसका कारण त्यो सम्भव भएन ।
अहिले चीन यात्राबाट फर्किएपछि निर्मल निवास उत्साहित छ। दक्षिणले जहिले पनि ‘पर्ख पर्ख’ मात्र भन्ने, तर चिनियाँले हुने कुरा ‘यस’ र नहुने कुरा ‘नो’ भनिदिँदा उत्साहित भएका हुन् । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।